कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
वडा कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख र उपप्रमुखबीच हात हालाहाल ! सिलालेखमा उप-मेयर थापा द्धारा ढुङ्गा प्रहार गर्दै नगर सरकार बिरुद्ध नै नाराबाजी !!
यसले कपाल वृद्धि हुन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
कपालमा चमक ल्याउन आलुको रसले मदत गर्छ ।
मह र अन्डा मिसाएर लगाउँदा यसले कपालमा राम्रो कन्डिसनर काम गर्छ ।
कपालको जरालाई सफा राख्छ ।
जरा स्वस्थ बनाउन पनि आलुको रसले सहयोग गर्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, कात्तिक ३ २०७७ २०:३९:५०
‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यविधिमा राजविाराजका केही चिकित्सककाे आपत्ति
बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको लागि ‘निक्स’ले गरायो सरकारलाई ध्यानाकर्षण
मोरङ : गङ्गाले दाँत माझ्दै गर्दा ब्रस नै निलेपछि…
प्रदेश १ सरकारलाई ६२ लाखको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण